Mpanamboatra kitapo fitsangatsanganana - Mpanamboatra kitapo Travel China, mpamatsy
Kitapo fitsangatsanganana T-N1018
TIGERNU kitapo duffle mahazatra ho an'ny dia
Fahafahana: Ity haben'ny kitapo fitsangatsanganana ity dia 45 * 25 * 25cm, kitapo duffle manana fahaiza-manao lehibe ahafahana mijanona ao anaty tranokely. Safidy mety tsara amin'ny dia lavitra na lasy ity. Misy efitrano fitehirizana lehibe iray, paosy roa sy paosy roa eo anoloana sy any aoriana, izay afaka manampy amin'ny fitazomana ny entanao rehetra ho voalamina tsara.
Kalitao: ity kitapo fonosana vita amin'ny duffle ity dia vita amin'ny polyester avo lenta splashproof & Scratch tahan maharitra izay mateza sy matanjaka. Ziper dia porofo mipoaka ary malefaka be ampiasaina.
Endri-javatra: ny kitapom-batsy dia manana tady azo esorina ary azo ampiasaina ho kitapo hitondra tanana sy kitapo soroka arak'izay ilainao. Ny base Anti-slip ABS eo amin'ny farany ambany dia ataovy madio ny kitaponao rehefa apetrakao ny kitapom-bolanao rehefa reraka ianao
Ity kitapo fitsangatsanganana ity dia azo ampiasaina ho kitapo duffle ho an'ny dia lavitra, fitsangantsanganana, fitsangatsanganana, fitsangatsanganana ary safidy tsara feno lamaody izany.